Janaraal Mukhtaar “Booliska kuma darno Shabaabka Dowladda isu soo dhiiba”. – Hornafrik Media Network
Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliyed ayaa markii u horeysay ka hadlay wararka la xiriira inuu Booliska ka tirsanaa ruuxii shalay isku qarxiyay Xarunta tababarka Ciidanka Booliska ee Janaraal Kaahiye.
Janaraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay ineysan jirin wararka sheegaya inuu askari ahaa qofka is qarxiyay, balse uu watay dharka Ciidanka Booliska, Sidaasna aan looga shakinin, kana soo baxay mid kamid ah guryaha doqoshka ah ee ku dhexyaala Iskool Pluzia.
Waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday sii hayaha xilka taliska Ciidanka Booliska Somaliyeed in booliska ay ka mid noqdaan raga ka soo goosta Al-Shabaab ee dowladda isu soo dhiiba.
Hay’adooda ayuu sheegay iney tahay meesha kaliya ee aan laga shaqaaleysiin raga isaga soo baxa Shabaab ee dowladda la shaqeeya, Xitaa qof lagu soo eedeeyay danbi la xiriiro Al-Shabaabnimo ayuu tilmaamay ineysan u qorin askarinmada Ciidanka Booliska.
Si kastaba, Qarax ay ku dhinteen 18 Askari oo Boolis ah ayaa shalay subax ka dhacay Janaraal Kaahiye, waxaana la qarxiyay askar isu diyaarineysay Gaardis si ay uga soo muuqdaan Xuska Arbacada ee maalinta Ciidanka Booliska Somaliyeed ee 20-ka December oo sanad kasta la xuso.
Al-Shabaab ayaa sheegatay inuu iyaga ka tirsanaa ruuxii isku qarxiyay Janaraal Kaahiye, waxeyna sheegeen in ismiidaamintaas ay ku dileen 27 Qof oo askar iyo Saraakiil isugu jirta.
HornAfrik ayaa ogaatay Qofka isku qarxiyay Magaciisa iyo Haybtiisa, iyo Waliba Askarta Dhimatay meelaha ay ka kala tirsanaayeen.
Halkan ka akhriso Warbixinta HornAfrik